Archive du 03-nov-2021
Fitantanana ny Firenena Sahirana Rajoelina vao lasa Ratsiraka
Hita taratra ny tsy fahampian’ny tolo-tsaina sy toromarika amin’ny fitantanana firenena ankehitriny, hany ka toa mandeha an-jambany arakaraka ny zava-misy sy miseho ny fitantanan’ny Filoha Rajoelina ny firenena.
ETHIOPIE RAIKITRA NY ADY AN-TRANO
Mikorontana sy karazan’ny efa tafiditra ao anatin’ny ady an-trano I Ethiopie amin’izao fotoana izao. Voatery nandray fanapahan-kevitra ny Governemanta tarihin’ny Praiminisitra Abiy Ahmed.
“Ny fiarahamonina tsy miraharaha. Aleony mionona tsy miraharaha. Lasa fomba mahazatra ny tsy miraharaha. Isika Malagasy lasa tsy miraharaha.”,
Kajikajy ara-pifidianana Ahiana hiverina ny hetsika 2018
Miditra tsikelikely amin’ny fanomanana fifidianana amin’ny 2023 isika. Samy miketrika ny politisianina sy ny Antoko politika samihafa. Mandeha ny fanomezana aina ny antoko sy ny kongresy samihafa.
Fifaninana « Robotex » any Estonie Tsy lasa ireo tanora Malagasy noho ny ara-bola
Tsy ho afaka ny hiatrika ny seho sy ny fifaninana “Robotex” any Tallinn Renivohitr’I Estonie ny 5-7 novambra ho izao ny ekipa robotika malagasy.
Raha tsy mihavana i Rajao, Ravalo, Rajoelina Hamono tena afaka 14 andro ny lehilahy iray
Poa toa izay dia niparitaka vetivety tao anaty tambazotran-tserasera omaly ny sarina lehilahy iray nitazona soratra miangavy ireo filoham-pirenena Malagasy teo aloha,
Fanamboaran-dàlana tao amin’ny ACMIL Mbola tsy naloan’ny Fanjakana ny 700 tapitrisa Ar
“Raha ny tena marina dia betsaka no tsy voaloa vola eto, tsy tany amin’ny fanamboaran-dàlana vatsian’ny FR (Fonds Routier) ihany fa ny vatsian’ny Minisitera sy ny Fanjakana foibe aza”,
Trosan’ny mpanao làlana amin’ny Fanjakana Ampanantenaina vola, tsisy fe-potoana mazava
Nangataka fihaonana tamin’ny Minisitry ny asa vaventy ny solontenan’ireo orinasa misehatra amin’ny asa vaventy, nanamboatra làlana sy fotodrafitrasa samihafa, kanefa mbola tsy nahazo ny tambiny.
Arizaka Rabekoto Raoul Noroahina tsy ho mpitsara ihany koa
Mpitsara miisa 5 no nakarina filankevi-pifehezan’ny Fitsarana ny zoma lasa teo, ka ny 4 tamin’ireo no nosaziana. Nisy moa ny fivoriamben’ny Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM) ny 27-28-29 oktobra lasa teo.
Solontena ao amin’ny CENI Haverina ny fifidianana ho an’ny Fitsarana Tampony
Tsy isan’ireo olona nankatoavina tamin’ny alalan’ny didim-panjakana ny 30 oktobra teo ho mpikamban’ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana (CENI) Atoa Randrianarivonantoanina Fanomezantsoa Tiana,
Fiarahamonina Malagasy Miha manjaka ny fiolonolonana
Efa ela no nanairana ny sain’ny maro mikasika ity fitiavana maka sary fa tsy manana fahaterena hamonjy intsony ireo mpiara-monina aminy sendra tra-doza ity.
Simba teny an-dranomasina ny sambokely Mpiondrana antsokosoko 4 ho any Mayotte maty…
“Botry iray avy any Ambanja nikasa hanondrana olona an-tsokosoko ho any amin’ny Nosy Mayotte no tratran’ny Tafika an-dranomasina teny amin’ny manodidina ny Nosy Iranja omaly 02 novambra.
Mpitsabo nentim-paharazana Hananganana borigady manokana hiady amin’ny piraty
Tontosa ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny foiben’ny fikambanamben’ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara etsy Ivandry ny dinika momba ny fomba hananganana ny birao
Zandarimariam-pirenena “Aza ampidirina amin’ny loko na firehana politika izahay”
“Tsy misy hidiran'ny zandarimariam-pirenena ny resaka hafatra miafina tao anaty vondrom-pifandraisana iray atao hoe "Fb Com",